Than Win Hlaing – Poem for SUU | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
MOEMAKA (stop) PRESS !!!
MOEMAKA in (word) PRESS
MoeMaKa PRESS !!!
← Maung Maung One – 23 year ago 8888 (Part 4)
Tu Maung Nyo – Equality is the best policy for the peace in Burma →
Than Win Hlaing – Poem for SUU
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘွဲ့ကဗျာများ (အပိုင်း – ၁)
သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၁
လူသားတိုင်းသည် စည်းစိမ်ချမ်သာကို အလိုရှိ၏။ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ ကင်းဝေးလို၏။ ချီးမွမ်း မြှောက်ပင့်မှုကိုခံယူလို၏။ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းခံရခြင်းမှ လွတ်ကင်းလို၏။ သူတစ်ထူးအကျိုးထက် မိမိအကျိုးကိုသာ ပိုမို၍လိုလားပေသည်။ ဤသည်မှာ သာမန်လူသားတိုင်းတွင်ရှိတတ်သော သဘောထားပင်ဖြစ်သည်။
သာမန်လူအဆင့်မှ ကျော်လွန်၍ စည်းစိမ်ချမ်းသာကို မမက်မောသူ ဆင်းရဲဒုက္ခကို မမှုသူ၊ မြှောက်၍လည်းမမြောက် ခြောက်၍လည်း မကြောက်သူ၊ ကိုယ်ကျိုးကိုစွန့်၍ အများအကျိုးအတွက် မိမိယုံကြည်ချက်ကို ရင်ဝယ်ပိုက်၍ သတ္တိရှိရှိဆောင်ရွက်နေသော အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ သည် ဤလောက၌ တကယ်ရှိသည်ဆိုအံ့။ စံတင်ထိုက်သူ မော်ကွန်းတင်ထိုက်သူဖြစ်သည်။ အများ၏ ကြည်ညိုလေးစားထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်လည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကို ဖယ်ရှားနေသူသက်သက်သာမဟုတ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့၊ သတ္တိရှိရှိပြည်သူလူထုကြီးနှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်နေသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကို အထ္ထုပ္ပတ္တိရေးသူများက ရေးကြသည်။ ဆောင်းပါးရေးသူများက ရေးကြသည်။ ဇာတ်လမ်းဆင်ကာ သူ့ဘ၀တစ်စိတ်တပိုင်းကို ဗီဒီယို မှတ်တမ်းရိုက်သူကရိုက်၍ ရုပ်ရှင်ရိုက်သူက ရိုက်ကြသည်။ ထိုနည်း တူစွာ ကဗျာဆရာများကလည်း ကဗျာစပ်၍မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ပြုရေးဖွဲ့ခဲ့ကြသော ကဗျာဆရာများတွင် မြန်မာစာပေလောက၌ အထူးထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သော စာရေးဆရာကြီးများ၊ ကဗျာဆရာကြီးများအပြင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကလောင်သစ်များလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ဘွဲ့ကဗျာများကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ လေ့လာကြည်ရှုသောအခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အခါတော်သမျှ၌ ကွယ်လွန်သူ ကဗျာဆရာကြီးနှင့် စာရေးဆရာကြီးမင်းသုဝဏ်က အောက်ပါအတိုင်း ရေးဖွဲ့ပေးခဲ့သည်။
မြတ်ဆုမွန်ကောင်း တောင်းကြစို့။ ။
ထို့နည်းတူစွာ ဆရာကြီးဒဂုံတာရာကလည်း ဒေါ်စု၏မွေးနေ့တွင် ဤသို့ခံစားရေးဖွဲ့ပေးခဲ့သည်။
ကွယ်လွန်သူဆရာကြီးတင်မိုးကလည်း ၁၉၉၉ မတ်လ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခင်ပွန်း ဒေါက်တာမိုက်ကယ်အဲရစ် ကွန်လွန်ပြီး (၂) ရက်အကြာ ၁၉၉၉ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် စုရဲ့အလင်းရောင်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံရေးပုံရိပ်ကို ခံစားရေးဖွဲ့ပေးခဲ့သည်။
၂၉ ၊ မတ်၊ ၁၉၉ (တနင်္လာနေ့နံနက်ခင်း)
ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မီးလျှံထဲကကြာနှင့် ခိုင်းနှိုင်းကာ ဤသို့သီကုံးရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။
ရဲ – ဇွဲ – ဥာဏ် – စည်း – တာ
ရဲဆိုတာ = ရဲရင့်ခြင်း။
ဇွဲဆိုတာ = စွဲမြဲခြင်း။
ဉာဏ်ဆိုတာ = ဉာဏ်ပညာကြီးမာခြင်း။
စည်းဆိုတာ = စည်းကမ်းရှိခြင်း။
၂၀၁၀ပြည့်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့၌ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အောင်ပွဲရသည့်တိုင် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းရေးဖွဲ့ခဲ့သည်။
၂၇ ၊ ၉ ၊ ၂၀၁၀
Posted by oothandar on August 19, 2011 in For the record, Than Win Hlaing
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (9th September 2011)
Aung Din – Irrawaddy Revolution
Cartoon Zaw Hmine – Same Old Story for Burma
Save Irrawaddy Initiatives from collective community
Washington Metroa & Neighbours invite September Event
Fund Rasiing for Kachin Refugee donated US$ 6000.00
treasure of my life, poems from my heart – 30
Letters from Michigan 85
Than Win Hlaing – Maung Su Shin
Sept 11th, 2011 -MoeMaKa Radio
Yan Win (Taung Da Gar) – Craving to taung thaman
Cartoon Saw Ngo – USDP Govt
Kyaw Thu – FFSS.YGN & Mr.Derek Mitchell
Ku Mojo – ready to go home?
Categories Select Category 100 The Anniversary of3Composers 2007 Saffron Revolution 2010 Election 7th July Special 88 Generation Students 8888 – 20 Years 8888 – 23 Years About MoeMaKa Analysis APK Ashin Kaung Ashin Nanika Ashin Pyinna Nanda Ashin Wiriya Aung Bala Aung Din Aung San of Burma Aung San Suu Kyi Aung Tha Nge Aung Wa – Letters from Michigan Aung Way Aung Way – Revolution participants Aung Way on the fifth nation Australia Burmese News Aw Pi Kye Bio Data Book Shelf Burma News Headlines Burmese Helping Burmese Burmese on the Move Cartoon Beruma Cartoon Box Cartoon Mr. Thakhin Cartoon Tin Ko Ko Oo Citizen of Burma Award Classics Contemporary Experience Critic View Critics Culture Dagon Taryar DASSK Datha Daung Ni Di Let Myo Dismise Dr Maung Ba Chit Ei Kyar Kway Environment Essay Evironment For the record Fun Gamanii Gaw Shall Gossip Gyaw Dee Hay Man Thazin History Htet Yar Zar In English Interview Interviews Japan Burmese News Jittoo Monywa Journal Digest Journals Digest Junior Win K Kamar Pale Kan Tun Thit Karen Burmese News Kay Khaing Mar Kyaw Zaw Khet Mar Khin Hnin Lwin Khin Myo Chit Khine Linn (May Ga Wadi) Know How Ko Ko Gyi Ko Mike Sein Ko Moe Pwint Thit Kyaw Homes Kyaw Thu Kyaw Thu Moe Myint Kye Mon U Thaung Kye Thee Law Eh Soe letter Letter from readers Lighter Side Local Announcement Local News Headlines Ludu Daw Ah Mar – 93 Years – Special Edition Ma Thitsar Magazine Digest Mar Mar Aye Maung Aw Maung Ba Chit Maung Ga Nan Sein Maung Ko Oo Maung Luu Yay Maung Lwan Ni Maung Maung One Maung Swan Yi Maung Thar Noe Maung Thar Ya Maung Thit Minn Maung Yit May Ka May Nyane Memories MileStones Min Kaung Chit Min Kyaw Khine Min Thu Wun MMK Visual Archive Moe Cho Thin Moe Hein Moe Hlaing Nya Moe Nat Thar Moe Sal Nay Moe Zaw MoeMaKa Archive Gallery MoeMaKa Win Muditar Lamin Music VDO My Academy Sein Myo Myint Cho Naing Kyaw Naing Mo Aung Thar Nann Nyunt Swe Nargis Nat Nwe Nay Pyi Daw News News Features News in Brief News in Photos Ni Lon Oo Ni Lwin Thwe (Dathanika) NLD Numbers in the News Nyan Oo Maung NYC Burmese News Nyo Htet (Lan Thit Oo) Obitury Op-Ed ORatha Ottara Moon Overseas Burmese Overseas Events Overseas News Overseas News Headlines Paragu Pe Thein People Photo Essays Photos Phyu Phyu Thin Play PLHA Po Than Ludu poem Poems Political Prisoners Potraits Quotable Quotes Radio Radio Program Rangoon News Recollection Records Reviews Revolution participants s Satire Saung Luu Saung Yun La Saw Ngo Serial Program Serial Translation Short Stories Shwe Pyi Soe Shwe Zee Gwet Soe Ne Lin SPDC Related Special Dedication Sport Student Movement in Burma SUU66 Talk Technology Thakhin Aung San of Burma Than Htay Maung Than Soe Hlaing Than Win Hlaing Thar Oo TheGeek Theipan Chit Thu Thit Kaung Eain Thoughts Thu Rain Min Thurain Htet Tin Moe Travelouge Tu Maung Nyo U Aye Myint U Ohn Kyaw U Win Tin UN Burma News Uncategorized USA Burmese News USDP Variety Article VDO News Visual Archive Volunteer and Charity Win Pe Yan Lo Kywe Yan Win (Taung Da Gar) Ye Yint Thet Zwe Ywar Zaw Gyi Zarganar Zarny Win Zaw Gyi Zawaree Zay Hmine
Yan Win (Taung Da Gar) – Zat Poah Saing
Min Kyaw Khine - Sketch for DASSK
Ko Myo Art - 63rd Anniversary of Martyrs Day of Burma
Min Kyaw Khine – For Htoo Ein Thin
return of Yazar Nay Win
Than Win Hlaing – Moe Moe (Inya)
journal pieces on June 29
Should not forget Martyrs Day - Nu Nu Nge Nge
64th Anniversayr of Burmese Martyrs Day
2 Burmese and3Thai nabbed in Bangkok fake sex drugs swoop
June 2011 (286)
December 2010 (184)
November 2010 (205)
July 2008 (118)
January 2008 (106)
September 2007 (146)
MoeMaKa Charity & Shop